Olee ka ihichapụ iPad akwụkwọ iTunes
> Resource> iTunes> Olee otú iji Hichapụ iPad Documents na iTunes
Abụ m onye iPad ọrụ. M chọpụtara na ọ dịghị faịlụ ihichapụ bọtịnụ na iPad iTunes, nke bụ n'ezie abụghị adaba. Nke ahụ bụ iju ma-enweghị ezi uche n'ihi na ọrụ. Ọ bụ na e nweghị ụzọ anyị ka ihichapụ ghara ịdị irè ma ọ bụ achọghị akwụkwọ na faịlụ na iTunes on iPad?
Dabara nke ọma, m na-ahụ a usoro ka ihichapụ faịlụ site na iTunes. Dị ka ndị na-esonụ usoro, usoro dị mfe ma e nwere ike dancing site ị.
Ka ihe atụ, m surfed YouTube weebụsaịtị na Mac na ebudatara ọkacha mmasị m videos nke lady gaga na Free YouTube Downloader maka Mac. The videos akpaghị aka-egosi na iTunes. Mgbe ahụ, m mmekọrịta m ya iPad na akwụkwọ anatara na iTunes on iPad.
Mgbe ahụ m bu n'obi na-egwu video on iTunes on iPad, ma mgbe ụfọdụ m ịgbakwunye YouTube video faịlụ na iTunes agaghị akpọ. N'ihi ya, m ga-kama ihichapụ ya .Okay, faịlụ adịghị ọbụna egosi na ngwa-pụtara m nwere ike ghara ihichapụ ya si n'ebe. Ugbu a, ihe?
M na-ahụ faịlụ aha si akwụkwọ ndepụta, mata ya na mgbe Pịa igodo Nhichapụ igodo gị keyboard. ITunes Pop elu a igbe na-arịọ maka m nkwenye. Ì ji n'aka na ị chọrọ ka ihichapụ họrọ akwụkwọ gị iPad ?, Kagbuo ma ọ bụ Hichapụ. Pịa Hichapụ na ọ bụ OK. Usoro bụ otu ihe ahụ na ihichapụ m PDF faịlụ.
Ọfọn, ị nwere ike na-atụle ya a obere atọ. N'ezie, iTunes strangely enwereghị a Nhichapụ bọtịnụ na a File Ịkekọrịta ebe, na nri-na ịpị a akwụkwọ na-eme adịghị mma. Ya mere, anaghị egbughị oge na-achọta Nhichapụ bọtịnụ. Ma eleghị anya, anyị nwere ike na-ekwu na Apple ịgbakwunye a Nhichapụ bọtịnụ na faịlụ nkekọrịta maka iPad ọrụ.